Ogaden News Agency (ONA) – Budhcad Adeegsanaysay Magaca Dhalinta Oromada oo Laqaqabta.
Budhcad Adeegsanaysay Magaca Dhalinta Oromada oo Laqaqabta.
Booliiska wadanka Itoobiya ayaa lasheegayaa in ay gacanta kusoo dhigeen 171 dhalinyaro ah oo fadqalalo iyo xasilooni daro kawaday gudaha wadanka.
Sida xogta aan kuhelayno dhalinta laqaqabtay oo hab budhcad nimo ah kushaqaysan jirtay ayaa adeegsan jiray magaca dhalinta Oromada ee Qeerroo, waxaana lasheegayaa in laga sooqaqabtay moolo kala duwan oo wadanka kamid ah.
Dhalintan ayaa lasheegay in qaar kamid ah ay sheegan jireen masuuliyiin ama xubno sarsare oo dhalinta Qeerroo ah, xilalkaas oo ahaa kuwo been abuur ah ama ay ugu talagaleen in ay dadka shacabka ah kudhibaateeyaan.
Dhalinta Oromada ah ee lamagac baxday Qerroo ayaa lasheegayaa in ay ogaadeen dadka magacooda ku adeegta isla markaan wadanka ku khalkhalgaliya, waxaana lasheegayaa in ay liiska dadkaasu kuqoranyihiin ugudbiyeen booliiska wadanka.
Dhalinta Qeerroo oo markii hore ku ku abuurantay cadho laga qaaday maamulkii hore ee Wayaanaha ayaa qoomiyada Oromada ukeenay guulo badan waxayna sababeen in ay taladii katuuraan maamulkii hore kadib kavdoon sanado socday.
Hase yeeshee dhalinta Qeerroo ayaa gaystay tacadiyo badan oo ay kamid ahayd in ay qayb wayn kaqaateen colaadii Soomaalida iyo Oromada udhaxaysay waxaana Qerroo lagu eedeeyay dilka dad badan oo shacab ah.